Zidane wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee ka war qabay in musiibadan soo socoto ! – Gool FM
(Madrid) 06 Maarso 2019. Qoraaga Spanish-ka ah ee Jose Felix Diaz oo falanqeeya isboortiga ayaa waxa uu warbixin ku qoray wargeyska ‘Marca’ ee Spain, wuxuuna sheegay in dharbaaxadii xalay 05 Maarso, 2019 ku dhacday Real Madrid ay noqotay mid taariikhda ku qorantay.
Madrid oo 4 Champions League ku guuleysatay 5 sanadood ee la soo dhaafay ayaa waxaa rajadeedii Koobka Horyaallada yurub waxaa soo afjartay Ajax oo 4-1 xalay kaga saartay tartanka UEFA Champions League.
Taageerayaasha naadiga Los Blancos ayaa aaminsan in ay marayaan xilli adag, horeyna ay u soo qaateen sanado badan oo farxadeed oo ay Koobab badan ku guuleysteen, waxayna ka war hayaan oo kale sida qoraagu sheegay in kooxda haatan dhisan mar dhow dhammaantood la macasalaameyn doono oo koox cusub la abuuri doono.
Tallaabada ugu horreysa ee Real ay qaadayso si ay u dhisto koox awood leh ayaa waxay noqonaysaa in ay magacawdo macallin cusub oo beddeli doono Santiago Solari.
Tababarihii hore ee Real Madrid, Zinedine Zidane ayuu sheegay qoraagu in uu dareemay in masiibadan soo socotay markii kooxda uu ka tegay dhaliyihii weynaa ee Cristiano Ronaldo, waxaana go’aankii uu Zidane qaatay ee uu kaga tegay kooxda uu ahaa mid gebi ahaanba wiiqay awooddii Real.
Qoraagu wuxuu caddeeyay in iyadoo Ronaldo uu aqbalay in uu dhimo mushaarkiisa haddana ay Real Madrid qorshaha ku dartay inay iska fasaxdo.
Hadda taageerayaashu waxay ku kacsan yihiin Guddoomiyaha naadiga Florentino Perez oo laga sugayo in uu go’aanno ad adag qaato.